Cathedral yeGungwa bhuku: ndiani akarinyora, ndezvei nezve, mavara | Zvazvino Zvinyorwa
Bhuku reKathedral yeGungwa Yakanga iri yekutanga iyo munyori, Ildefonso Falcones, akazivikanwa munyika yezvinyorwa, achive akabudirira zvese munyika nepasi rese. Icho chokwadi chekuti chakasanganisa kuvimbika uye kutsiva, rudo uye kutengesa, pamwe nezvimwe zvinhu zvinomisirana kunze, zvakaita kuti zvionekwe.
Asi ndezvei? Izvo zvakanaka sekutaura kwavo here? Zvakakosha? Kana iwe uri kushamisika uye usati waona kuchinjika kana kuverenga bhuku, izvo zvatiri kukuudza zvinogona kukubatsira kubvisa kusahadzika.
1 Ndiani munyori webhuku La Catedral del Mar
2 Chii chiri bhuku reThe Cathedral of the Sea nezve
4 Iwo akateedzana ayo anochinja bhuku
Ndiani munyori webhuku La Catedral del Mar
Sezvatakambotaura, iyo Munyori webhuku La Catedral del Mar haasi mumwe kunze kwaIldefonso Falcones. Muchokwadi, zita rake rakazara ndiIldefonso María Falcones deSierra. Ndiye gweta, asiwo munyori wechiSpanish.
Ruzivo rwake rwekutanga rwainzi The Cathedral of the Sea, muna 2006, asi chokwadi ndechekuti pese paanotora bhuku rinova bhuku rekubudirira.
Falcones ndiye mwanakomana wegweta uye amai vemba. Pazera ramakore gumi nemanomwe akarasikirwa nababa vake, uye izvi zvaireva kuti aifanira kusiya basa rake remitambo, nekuti aive mutyairi (zvakare shasha yeSpain pakuratidza kusvetuka). Nhanho yake inotevera yaive yekutanga kudzidza kuYunivhesiti, uye akazviita nenzira hombe: kudzidza madhigirii maviri: kune rumwe rutivi, Mutemo; kune rimwe, Ehupfumi. Nekudaro, akakurumidza kuziva kuti basa rake raive neMutemo uye akaisa pfungwa pabasa iri achishanda kuimba yebhingo.
Akapedza kudzidza segweta, kuve munyori hakuna kumutadzisa kuenderera mberi nebasa rake segweta kukambani yake yemagweta muBarcelona. Muchokwadi, edza kuzviisa zvese pamwechete. Uye chokwadi ndechekuti runyorwa rwekutanga rwaakatora rwakatora makore angangoita mashanu kuti amupe pekupedzisira. Nekudaro, mu2019 zvakazozivikanwa, nekuburitswa kwenhau yake yazvino, Iyo Mweya Painter, kuti munyori aive nekenza yekoloni, ine matatu metastases.
Izvo, pamwe chete nekurasikirwa nekuremekedzwa kwaakapihwa nekuverengerwa neHaimari nekuda kwemabhuku ake, kwakakonzera kubudirira kwake kudonha.
Chii chiri bhuku reThe Cathedral of the Sea nezve
Bhuku reThe Cathedral of the Sea rakaiswa muzana ramakore regumi nemana Barcelona uye nzvimbo yayo yepakati kuvakwa kwechechi yeSanta María del Mar. Zvisinei, sekune rimwe bhuku rine mukurumbira, rakadai seThe Pillars of the Earth, ichokwadi kuti iyi link inongova mamiriro ekutaura nezve hukama hwevatambi vanotora chikamu, zvakananga kana zvisina kunangana mairi.
Bhuku inotarisa kune vanogara mudunhu rehove muRibera de Barcelona vanoedza kugara nemari uye nesimba rebasa ravo. Ikoko ivo vanoita sarudzo yekuvaka tembere yeMarian, huru kwazvo iyo yave ichizivikanwa kusvika nhasi, iyo yavanodaidza kuti Santa María del Mar.
Ivo vachiri kuita izvi feat, protagonist werino, Arnau Estanyol, ari kuchinja, achikura uye achiona shanduko yeBarcelona. Pamwe chete nababa vake, Bernat, iye murume akaparadzwa nashe feudal ishe akamutorera zvese.
Mune novel unogona kuona kuti vanoenda sei kubva pakuva vapoteri kuenda kune vanokudzwa, asi zvakare nzira iyo vavengi vanoda kumuona achiurawa mumaoko eInquisition vanotanga kukura.
Cathedral yeGungwa ine vatambi vazhinji avo, pane dzimwe nguva munhoroondo, vanova protagonists. Nekudaro, kutaura nezvavo zvese zvinenge zvisingaite, saka tinokusiira isu vatinofunga inonyanya kukosha yenyaya.
Arnau Estanyol: Ndiye protagonist asina kupokana webhuku iri. Anokura semunhu akazvimiririra mugari weBarcelona asi hazvireve kuti haafanire kurwisa kusarongeka kwaari kuona.
Bernat Estanyol: Ndiye baba vaArnau.
Joan Estanyol: Ndiye mukoma waArnay, mwanakomana waBernat akagamuchirwa.
Baba Albert: Mufundisi weKathedral. Iyo ndiyo inopa Arnau chiratidzo chakazvininipisa chekusarongeka kunoitika kwakamupoteredza uye anoita, neimwe nzira, senzwi rehana yake.
Francesca Esteve: Amai vaArnau. Anopedzisira abatwa chibharo uye izvo zvinoita kuti aite chipfambi.
Aledis: Ndirwo rudo rukuru rwe protagonist. Zvisinei, pavanoparadzana kwechinguva, apo Arnau anodzoka anoona kuti ave hure pasi pemirairo yaamai vake.
María: Ndiye mukadzi wekutanga waArnau.
Sahat: Hunhu uhwu hwakakosha kwazvo kuna Arnau nekuti ndiye anovhura maziso ake kuti abudirire. Ehe, iye muranda.
Elionor: Mukadzi wechipiri waArnau uye wadhi yaMambo.
Iwo akateedzana ayo anochinja bhuku
Iwe unofanirwa kuziva kuti, muna 2018, kunyanya muna Chivabvu 23, Antena 3 akatanga kutepfenyura munguva yepamberi (kubva na22 pm kusvika pakati pehusiku) kugadziriswa kwebhuku The Cathedral of the Sea.
Uyu chete inoumbwa nezvikamu zvisere zvemaminitsi makumi mashanu pakureba Uye chokwadi ndechekuti yaive yakabudirira, nekuti chitsauko chekutanga choga chaive nevatariri vangangosvika mamirioni mana.
Zvino, sezvazvinowanzoitika nguva dzose, pane misiyano yakawanda pakati peAntena 3 akateedzana nebhuku. Semuenzaniso, kuti maPuigs ari mungano aive nevana vana, nepo mune akateedzana vaingova nevatatu chete. Kupfuurirazve, chiitiko umo Margarida anoona kurohwa kwemuranda Habiba hazviitike mubhuku zvakare.
Kune zvimwe zviitiko zvisingaitike futi, asi izvo vaimbopa kupa mimwe mitambo kana kuwedzera kusimbisa hukama pakati pevatambi. Muchokwadi, kune vamwe vachiri vapenyu pavanofa munoverengeka uye vamwe vane mhedzisiro yakasiyana neinotaurwa naIldefonso Falcones.
Saka, ikozvino sezvo iwe uchiziva mazhinji ein uye kunze kweiyo Cathedral yeGungwa bhuku, inguva yekuti iwe uite sarudzo yekuverenga kana kwete. Ehe, iwe unofanirwa kuziva kuti kune chikamu chechipiri, Vagari venhaka, icho chakaburitswa muna 2016. Hatizive kana chikamu chechitatu chichasvika munguva pfupi, asi iwo mabhuku aunogona kuverenga pasina dambudziko nekuti vane avo kutanga nekuguma kwavo. Wakamboiverenga here? Iwe unofungei nezvazvo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Iyo Cathedral yeGungwa Bhuku